MMTECH, Author at MMTECHHOUSE
ချူစားတယ်ဆိုတဲ့ နေဒွေးရဲ့စွပ်စွဲချက်ကို Live လွှင့်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေး Htang Ra
May 20, 2022 MMTECH
သရုပ်ဆောင်နေဒွေးနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ ချစ်သူတွေအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာလက်တွဲခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့် လမ်းခွဲပြတ်ဆဲလိုက်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့မှာတော့ နေဒွေးနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ Htang Ra တို့က နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပြီး နေဒွေးကလည်း သူ့ရဲ့ချစ်သူ Htang Ra ဟာ အိမ်ထောင်ရှိယောကျာ်းနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်း၊ သူ့ဆီက ပိုက်ဆံသိန်း ၁၀၀ ချေးပြီး ချူစားအကြောင်းတွေဖွင့်ဟခဲ့ပြီး Htang Ra…
သူမကိုအရှက်ခွဲဖို့ အကွက်ကျကျစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေဒွေးအကြောင်းကို Screenshot နဲ့တကွ ပြောပြလာတဲ့ Htang Ra
သူမကိုအရှက်ခွဲဖို့ အကွက်ကျကျစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေဒွေးအကြောင်းကို Screenshot နဲ့တကွ ပြောပြလာတဲ့ Htang Ra သရုပ်ဆောင်နေဒွေးကတော့ သမီးရည်းစားကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်း ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ နေဒွေးဟာ ဒီတစ်ခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ချစ်သူ မန္တလေးသူလေး Htang Ra နဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုစ့်တွေအပြိုင်အဆိုင်တင်ရင်း လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Htang Ra ကတော့ နေဒွေးဟာ သူမကိုအရှက်ခွဲဖို့ အကွက်ကျကျစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး…
Myanmar intends to draw in additional voyagers from Japan
May 17, 2022 MMTECH
The Ministry of Hotels and Tourism means to bait more Japanese explorers to the sea shores of Myeik archipelago in the JATA Tourism Expo in Tokyo from The service will…
May 16, 2022 MMTECH
တခြားသမီးရည်းစားတွေလိုမဟုတ်ပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထူးထူးဆန်းဆန်းနာမည်ပြောင်တွေပေးထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့စုံတွဲ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပုရိသတွေအသည်းကျော် မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ အခုဆိုရင် ချစ်သူရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ချစ်သူကိုလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးကြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့စုံတွဲရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ အလှဓာတ်ပုံလေးတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ခဲ့ရာ သင်ဇာ့ရဲ့ချစ်သူ…
Travel diary: an outing to Kawthaung
May 10, 2022 MMTECH
Indeed, our local escort Ye Zaw was one-sided. Extremely one-sided. In any case, as per him, Myanmar’s southern islands are undeniably more lovely than anything Thailand brings to the table.…
Angkor Wat, Bagan to be traveler sister urban communities
May 9, 2022 MMTECH
Asafeature of the ‘two nations, one objective’ crusade, the Myanmar and Cambodia the travel industry priests will inkaMemorandum of Agreement to tie Angkor Wat and the…
Excursion to Dawei Venturing south ona4 dawn
May 8, 2022 MMTECH
Coming fromamoderate and hazard antagonistic family, it took some persuading to push my family members to go along with me on an excursion to Dawei. For the Thadingyut…
Period of Empires: travelling through Middle Asian country
May 7, 2022 MMTECH
In spots, as an example, national capital and Bagan, Myanmar’s dynamite and violent history is investigated by Brobdingnagian range of guests. Anyway withal these2areas, there aramodest…